လာမည့် လေးလ အတွင်း အချိန်အခါ မဟုတ် စီးပွားဖျက်မိုးများ ရွာနိုင်မည် (တောင်သူများ သတိထားရန်လို) - Tha Dinn Oo
ဒီနှစ် ၂၀၂၁ နှစ်ဝက်ကာလက ၂၀၁၈ လိုဘဲ လာနီညာ သက်ရောက်မှု ရှိသော နှစ်ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ကြိုတင်သိရှိနိုင်စေလိုသော အချက်အလက်များ အခြေအနေများကို ဆွေးနွေး အသိပေးလိုပါတယ်။ ရက်ရှည်ခန့်မှန်းချက်များက ပြဆိုနေတာက ၂၀၂၁ ဇန်နဝါရီလနဲ့ ဧပြီလတွေမှာ ဧရာဝတီတိုင်း အရှေ့ခြမ်း၊ ရန်ကုန်တိုင်း၊ ပဲခူးတိုင်းအရှေ့ခြမ်း၊ မွန်ပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ ကယားပြည်နယ်၊ တနင်္သာရီတိုင်းများတွင် မိုးအသင့်အတင့်မှ တချို့နေရာများတွင် တလက်မခွဲ လောက်အထိ ရွာနိုင်ကြောင်း တွက်ချက် ထားကြပါတယ်။
ရက်ရှည်ခန့်မှန်းချက် ဖြစ်လို့ အနီးကပ်ရောက်လာရင်တော့ အနည်းငယ် ကွဲလွဲနိုင်ပါသေးတယ်။ အပတ်စဥ် ခန့်မှန်းချက်များနဲ့ ဖြည့်စွက် အသိပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာ အသိပေးမျှဝေလိုတာက မိုးရွာလေ့မရှိတဲ့ လများ ဇန္နဝါရီလလယ်နောက်ပိုင်းမှ ဖေဖေါ်ဝါရီလ မတ်လ ဧပြီလ လယ် ကာလအတွင်း မိုးရွာနိုင်စေတဲ့အကြောင်းတရားများဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီအချိန်ဟာ မုတ်သံလေ မဝင်ရောက်သေးလို့ မုတ်သုန်မိုး မဟုတ်သေးဘဲ ချိန်ခါမဟုတ်မိုးနဲ့ မိုးကြိုမိုး (အပူပျံတက်မိုး) များသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို မိုးမျိုး ရွာဖို့ဖိုရင်
ဒီႏွစ္ ၂၀၂၁ ႏွစ္ဝက္ကာလက ၂၀၁၈ လိုဘဲ လာနီညာ သက္ေရာက္မႈ ရွိေသာ ႏွစ္ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ႀကိဳတင္သိရွိႏိုင္ေစလိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အေျခအေနမ်ားကို ေဆြးေႏြး အသိေပးလိုပါတယ္။ ရက္ရွည္ခန႔္မွန္းခ်က္မ်ားက ျပဆိုေနတာက ၂၀၂၁ ဇန္နဝါရီလနဲ႔ ဧၿပီလေတြမွာ ဧရာဝတီတိုင္း အေရွ႕ျခမ္း၊ ရန္ကုန္တိုင္း၊ ပဲခူးတိုင္းအေရွ႕ျခမ္း၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ တနသၤာရီတိုင္းမ်ားတြင္ မိုးအသင့္အတင့္မွ တခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ တလက္မခြဲ ေလာက္အထိ ႐ြာႏိုင္ေၾကာင္း တြက္ခ်က္ ထားၾကပါတယ္။
ရက္ရွည္ခန႔္မွန္းခ်က္ ျဖစ္လို႔ အနီးကပ္ေရာက္လာရင္ေတာ့ အနည္းငယ္ ကြဲလြဲႏိုင္ပါေသးတယ္။ အပတ္စဥ္ ခန႔္မွန္းခ်က္မ်ားနဲ႔ ျဖည့္စြက္ အသိေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ဒီေနရာမွာ အသိေပးမွ်ေဝလိုတာက မိုး႐ြာေလ့မရွိတဲ့ လမ်ား ဇႏၷဝါရီလလယ္ေနာက္ပိုင္းမွ ေဖေဖၚဝါရီလ မတ္လ ဧၿပီလ လယ္ ကာလအတြင္း မိုး႐ြာႏိုင္ေစတဲ့အေၾကာင္းတရားမ်ားျဖစ္ပါတယ္။အဲဒီအခ်ိန္ဟာ မုတ္သံေလ မဝင္ေရာက္ေသးလို႔ မုတ္သုန္မိုး မဟုတ္ေသးဘဲ ခ်ိန္ခါမဟုတ္မိုးနဲ႔ မိုးႀကိဳမိုး (အပူပ်ံတက္မိုး) မ်ားသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို မိုးမ်ိဳး ႐ြာဖို႔ဖိုရင္
Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing! မမ
ဒီကနေ့ အသက်(၃၀)ပြည့်မွေးနေ့အလှူအဖြစ် ကိုဗစ်ကုသရေးဌာန အောင်မြင့်မိုရ်အိမ်ရာကို နေ့လည်စာ လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ အောင်မင်းခန့်
သရုပ်ဆောင် မင်းသားချော အောင်မင်းခန့်ကတော့ ဇာတ်လမ်းတွဲလေးတွေမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ရင်း တဖြည်းဖြည်းနဲ့ နာမည်ရအောင်မြင်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အောင်မင်းခန့်က ချောမောခန့်ညားတဲ့ရုပ်ရည်လေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ယောက်ျားပီသတာကြောင့် မိန်းကလေးပရိသတ်တွေရဲ့ဝန်းရံအားပေးမှုကိုလည်း ရရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သရုပ်ဆောင်တော်တဲ့ အောင်မင်းခန့်က ဇာတ်လမ်းတွဲတွေ အများအပြားရိုက်ကူးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ နိုဝင်ဘာ ၂၅ ရက်နေ့ကတော့ ပရိသတ်အချစ်တော် သရုပ်ဆောင် အောင်မင်းခန့် ရဲ့ အသက် (၃၀)ပြည့် မွေးနေ့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ အောင်မင်းကတော့ ဒီကနေ့ အသက်(၃၀)ပြည့်မွေးနေ့အလှူအဖြစ် ကိုဗစ်ကုသရေးဌာန အောင်မြင့်မိုရ်အိမ်ရာအတွက် နေ့လည်စာ လှူဒါန်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်ပရိသတ်ကြီးကလဲ အောင်မင်းခန့် ရဲ့ မွေးနေ့အလှူလေးကိုဘသာဓုခေါ်ရင်း မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါဦးနော် ။ Swelsone News
နာရေးကူညီမှုအသင်းရဲ့ ပြန်ကြားရေး ရုံးအဖွဲ့က ဝန်ထမ်းတစ်ဦးမှာ COVID-19 ရောဂါပိုး တွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့် ထိုဝန်ထမ်းနဲ့ ထိတွေ့ခဲ့သူ ဦးကျော်သူကိုလည်း ရောဂါပိုးရှိမရှိ ဒီနေ့မှာ စစ်ဆေးခဲ့ရာ ကိုဗစ် – ၁၉ ရောဂါပိုး တွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ” တွေ့ပြီ P တဲ့။အများအတွက် မျိုးဆက်သစ်တွေကို ဦးဆောင် ပေးဆပ်ရင်းဖြင့် ကျဆုံးခဲ့ရမှုကို ကျေနပ် ပီတိဖြစ်စွာ လက်ခံလိုက်မိပါသည်။ “ငါမရှိရင် ငါ့ထက် ရဲရဲကြီး ပေးဆပ်ရဲသူ ရောက်လာလိမ့်မယ်” “ငါမရှိရင် ငါ့ထက်သီလလုံခြုံ သစ္စာဆိုရဲသူ ရောက်လာလိမ့်မယ်” ” ငါမရှိရင် ငါတို့ချမှတ်ခဲ့တဲ့ပရဟိတအုတ်မြစ် အဆောက်အဦးက ဒီထက်ပိုပြီး ခိုင်မာ၊မြင့်မား၊တိုးတက် လာလိမ့် မယ်” အားလုံးကို ကြိုတင်ပြင်ဆင် ထားမှုက ခေါင်းဆောင်တွေ ရဲ့ အလုပ်။အေး မင်းတို့ဖက်က ညီညွတ်ကြ ဖို့ပဲလိုတယ်။ […]